Kwehlile ukudayiswa kwezimoto
Izindaba / 11 March 2018, 4:48pm / INTATHELI YEZEZIMOTO
KWEHLILE ukudayisa kwezimoto ngenyanga eyedlule uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo nyakenye.
Lokhu kuvezwe yiNaamsa ezibalweni zokudayisa kwezimoto ngoFebhuwari.
Le nhlangano ithe zibe ngu-46 347 izimoto ezidayisile nokube wukwehla ngo-1 854 noma u-3.8% uma kuqhathaniswa no-38 201 wangoFebhuwari nyakenye.
Ngayo inyanga eyedlule zibe ngu-27 437 izimoto ezithunyelwe ngaphandle kwaseNingizimu Afrika nokuyisibalo esehle ngo-1 681 noma u-5.8% uma kuqhathaniswa no-29 154 wangesikhathi esifanayo ngonyaka odlule.
Kuzona zonke izimoto ezingu-46 347 ezidayisiwe, ezilinganiselwa ku-38 920 noma u-84% wazo udayise emagaraji, u-9.7% udayise yizinkampani eziqashisa ngezimoto, u-3.7% kwaba ngowezinkampani kwathi u-2.5% wathengwa nguhulumeni.
Izimoto ezincane ezidayisile zibe ngu-31 200 okube yisibalo esehle ngezimoto ezingu-123 noma i-0.4% uma kuqhathaniswa nezingu-31 323 ezadayisa ngoFebhuwari ngonyaka odlule. Imboni yezimoto eziqashisayo ibe ngu-13.9%.
Ukuthengwa kwezimoto ezingamaveni namatekisi kwehle ngo-1 410 noma ngo-9.6% kusuka ku-14 622 ngoFebhuwari wonyaka odlule njengoba kulokhu kube ngu-13 212.
INaamsa ithe ngesikhathi kwethulwa isabelomali ngenyanga edlule, ukunyuswa kwentela kaphethroli kungase kube nomethelela omubi ekuthengweni kwezimoto. Ithe kodwa ukunyuka komnotho kungase kube namandla okungenza kube ngcono ekuthengweni kwezimoto ezintsha.
Ukunyuka komnotho emhlabeni jikelele kungase kube nomthelela omuhle ekuthunyelweni kwezimoto kwamanye amazwe.
INaamsa ithe ilindele ukuthi kunyuke ngesibalo esilinganiselwa ku-10%.
Ezinye zezimoto ezidayise kakhulu kubalwa iToyota Hilux (3 369), Volkswagen Polo (2 847), Ford Ranger (2 253) nezinye.